Ngabe ukuxubana kweGolden Retriever Border Collie kukulungele? - Izinhlobo
Yini oyitholayo lapho uhlanganisa izinhlobo ezimbili zokusebenza ezisezingeni eliphezulu? Kulokhu, kungumxube weGolden Retriever Border Collie!
Futhi ibizwa nge- IGolden Border Retriever, iColtriever, iGollie, neGolden Border Collie, uzocindezelwa kanzima ukuthola i-hybrid ehlakaniphile futhi ezinikele njengale.
AmaCollie Golden Retrievers awekho ngaphandle kwama-qurik awo, noma kunjalo. Qhubeka ufunde ukuze ubone ukuthi yini ebeka lokhu kuhlukaniswa phakathi kokunye!
Umlando weGolden Border Collies
Ngabe ukuhlanganiswa kweBorder Collie Golden Retriever kubukeka kanjani?
Ngabe i-Golden Retriever Border Collie ihlangana nezinja ezinhle zomndeni?
Ukuba ngumxube we-Golden Retriever Border Collie
Kuhlangana isikhathi esingakanani imixube yeGolden Retriever Border Collie?
Ungathenga kuphi ukuxuba kweGolden Retriever Border Collie?
Ingabe akhona amanye ama-Border Collie crossbreeds & Golden Retriever mixes?
Isinqumo: Ngabe kufanele uthole ukuhlanganiswa kweGolden Retriever Border Collie?
Abekho abalimi abasukume bazithathela udumo ngokuwela kuqala iBorder Collie neGolden Retriever, ngakho-ke asinalo ulwazi oluningi ngemvelaphi yalo.
Kubonakala kunengqondo ukuthi ukuzala ngenhloso kwaqala esikhathini esithile eminyakeni eyishumi edlule noma kunjalo, kodwa ayikho indlela yokwazi ngokuqinisekile.
Yize uyi- i-hybrid entsha , ukubhaliswa kwezinhlobo eziningana sekuvele kusibonile isiphambano seBorder Collie Golden Retriever.
Labo yibo Inja Registry yaseMelika (DRA), I-American Canine Hybrid Club (ACHC), I-Designer Dogs Kennel Club (DDKC), I-International Designer Canine Registry (IDCR), futhi I-Registry Breed Registry (DBR).
Laba bazali abamsulwa be-canine baziwa futhi baduma umhlaba isikhathi eside manje.
Ake sibheke iBorder Collie neGolden Retriever ngokuningiliziwe ukubona ukuthi yini abangayidlulisela enzalweni yabo yezinja ezingumklami.
Hlangana neBorder Collie ekhazimulayo
Kudunyiswe ngakho ikhono lokwalusa elihlukile, i Umngcele Collie unezimpande ekunqobeni nasekuhloleni.
Emakhulwini eminyaka adlule, lapho amaRoma ehlasela iBrithani ngempumelelo, aletha izinja zawo ezazizokwelusa izimvu ukuze zigibele.
AmaViking, nawo, azama isandla sawo ekuhlaseleni lokho manje okuyi-UK. NjengamaRoma, babengenisa abelusi babo bezilwane.
Ngokuhamba kwesikhathi, izinja zaseRoma nezamaViking zahlukaniswa ukukhiqiza inja esebenzayo yazo zonke izinja ezisebenzayo, namuhla ezaziwa ngeBorder Collie.
Imingcele sekuyisikhathi eside ibhekwa njenge- izinhlobo ezihlakaniphe kakhulu . Empeleni, izifundo khombisa ukuthi bangakwazi ukuqonda umyalo omusha ngezimpindelo ezi-5 noma ngaphansi.
Ngofuzo olunjalo, ungabheja ukuthi amamiksi weBorder Collie angajoyina i-canine Mensa, futhi!
Yazi iGolden Retriever
Singabonga uDudley Marjoribanks waseScotland ngokusinika i- IGolden Retriever .
Maphakathi nawo-1800s, iMarjoribanks yaqala ukwenza i- i-gundog engenakulinganiswa . Uhlanganise okungasekho manje I-Tweed Water Spaniel ephuzi I-Retriever eboshwe nge-Wavy . Isethi yase-Ireland futhi Igazi Izakhi zofuzo zanezelwa ekuxubeni, futhi.
Ngokuzalanisa ngokucophelela, yena nabalandeli bakhe ekugcineni bakwazi ukuphumelela iGolden Retriever yanamuhla.
IGoldens isakulungele ukusebenza nabazingeli bezinyoni zamanzi, kodwa futhi ezifuywayo ezifanele zomndeni . Bathanda amanzi, futhi bayathanda ukusebenza – kepha bathanda iphakethe labo ngaphezu kwakho konke.
Njengama-hybridi amaningi, kunzima ukuqagela ukuthi imidlwane yeGolden Border Collie izophuma kanjani, futhi izowela kokujwayelekile.
Imvamisa zibukeka njengeMingcele, kepha amajazi abo afana neGoldens.
Ama-Coltrievers anekhanda elilinganayo nezemidlalo, imizimba ehlangene.
Kugxile phakathi kwezindlebe ze-floppy nokusetha okubanzi nsundu, inhlaka noma amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka , isifonyo eside seGolden Border Retriever sinciphisela ekhaleni elithandekayo elimnyama noma elinsundu.
Uma kukhulunywa ngejazi leGolden Border Collie, i- amathuba emibala abonakala engenamkhawulo .
Loboya be-crossbreed bungaba cishe noma yimuphi umbala ongacatshangwa: omhlophe, omnyama, obomvu, ophuzi, osagolide, onsundu ngokukhanyayo, onsundu ngokumnyama, ushokoledi, i-fawn, i-English cream, noma i-merle .
Ubungabona inhlanganisela noma umbala owodwa oqinile.
Kukhona nethuba lokuthi iGolden Border Retriever yakho ibe nezimpawu ebusweni, esifubeni nasezinyaweni.
Amajazi weColtriever nawo angahluka ekubunjweni. Ezinye zalezi zidlwane zigcina zinoboya obuqondile, obuqinile, kuyilapho ezinye zithola amafa aluhlaza.
Njengoba kunikezwe ubude bezingubo zabazali babo, izinwele ezimfushane azinakubuzwa. Ungakwazi lindela ijazi eliphindwe kabili ukuya kwelide kusuka kule fido.
Bheka uTrinny kule vidiyo. Inhlanganisela yeGold Retriever Border Collie ethandekayo nomsila oyingqayizivele futhi uthokozela nje utshani.
Ngabe ingxube ye-Golden Retriever Border Collie izoba nkulu kangakanani?
Abesilisa bavame ukuba nesisindo esingamakhilogremu angama-50 kuye kwangama-75 (23 kuye kuma-34 kg) futhi ume phakathi kwamasentimitha angama-21 kuye kwangama-24 (53 kuye ku-61 cm) ubude.
Abesifazane bancane kancane , enesisindo esingamakhilogremu angama-45 kuye kwangama-70 kanye nobukhulu obungamasentimitha angama-48 kuye kwangama-22 ehlombe.
Ngaphandle kwesibungu sabo, ingxube ye-Border Collie Golden Retriever ingahlala kamnandi emakhaya amancane noma emafulethini – inqobo nje uma bevocavoca umzimba, kunjalo.
Uma ucabanga ngemvelaphi yokusebenza kwalolu hlobo, indlu enegumbi lokusebenzela ilungile .
IGolden Border Collies inabantu abajabulayo njengabazali bayo. Ilungele abangashadile abasebenzayo nemindeni enamandla ngokufanayo, lawa ma-canine enzelwe noma yini!
Nge- ubuntu obujabulisayo ngokwemvelo , ngeke babe nankinga yokwabelana nomuzi wakho nezingane, amakati, noma ezinye izinja. The more, merrier! Lokhu kuza nezibalo ezimbalwa, noma kunjalo.
Banobungane nesineke njengoba benjalo, ungacabangi ukuthi bangama-maven ezenhlalo azalwe ngokwemvelo. Basazodinga usizo lwakho lokufunda nokwenza imikhuba ye-canine.
Ngokujabulisayo, ukuhlanganiswa kweGolden Retriever Border Collie kuyisifundo esisheshayo.
Bangabantu abajabulisa abantu futhi bayathanda ukubukisa ngobuhlakani babo, ngakho-ke bazolalela ukulalela okuyisisekelo ngokushesha.
Ngalesi sizathu, singasho ngokuqiniseka ukuthi le hybrid iyi ukukhetha okuhle kubanikazi bama-novice nabanolwazi .
Ungayeki ukuqeqeshwa kwabo ngoba benekhono lokulalela okuyisisekelo, noma kunjalo.
Ukubuyisa Umngcele weGolden langazelela izinselele zengqondo , ngisho nasekugugeni.
Konke okuphathelene nofuzo lwabo kuyabaphoqa ukuthi bacabange futhi baxazulule izinkinga.
Thuthukisa lelo khono ngokuqhubeka ubafundisa amaqhinga amasha noma ubanikeze umsebenzi ogcwele.
IGolden Border Collie ingasebenza ngokubambisana nabalimi, abafuyi bezinja, ngisho nabaqeqeshi bezinja! Cabanga ngeGollie umsizi wakho we-canine. Ungabafundisa nokuhlunga amasokisi akho. Kulezi zingcweti ezi-fluffy, isibhakabhaka ngumkhawulo.
Kufanele wazi futhi ukuthi uma iGolden Border Retriever ihamba isikhathi eside ingasebenzi — noma okubi kakhulu, ichitha isikhathi esiningi iyodwa ngokuphelele — impilo yengqondo yayo iyahlupheka.
Bangaba nemikhuba ebhubhisayo, njengokuhlafuna noma ukumba. Ngenye indlela, bangahle bahoxe futhi balahlekelwe yizinhlansi zabo. Kunoma ikuphi, i-pup yakho ikhombisa izimpawu ze- ukukhathazeka ngokwehlukana futhi mhlawumbe nokudangala.
Khumbula, abadingi inkampani kuphela - badinga ukuxhumana nokuzikhandla.
Lungisa uhlelo lwakho ukuze uhlangabezane kangcono nezidingo zakhe, noma uhlole ama-doggie daycares noma abahleli. Lokhu kuzophazamisa isiphambano sakho seGolden Retriever & Border Collie ekuqapheleni ukungabikho kwakho.
Njengezinhlobo eziningi ezinezinwele ezinde, ungalindela ukuchitha isikhathi esiningi ulungisa le pooch.
Okungahle ungakulungeli uhlobo lwabo lokuzivocavoca umzimba. Ingabe uzokwazi ukuhambisana?
Ukuzilungisa: Zinakekelwa kahle kakhulu
Hlangana noToby, umxube weGolden Retriever Border Collie - Umthombo wesithombe
Ama-gollies awekho hypoallergenic futhi anjalo kubhekwe njengabachitha kakhulu .
Ngazo zonke lezo zinwele nokuchitheka, kuzodingeka geza inja yakho okungenani kabili ngeviki . Ukuxubha njalo kusiza ukusabalalisa uwoyela wemvelo futhi kumnikeze ukukhanya okunempilo.
Iphinde yehlise noboya obuxegayo futhi ivimbele imiphimbo. Ngezinzuzo ezinjengalezi, zizwe ukhululekile ikama izinwele zakho zeColtriever kaningi.
Kungenzeka ukuthi uzwile ukuthi izinja zidinga ukugeza kanye njalo emavikini ambalwa, noma ukuthi ukushefa i-pup yakho kuyazigcina zipholile futhi kunciphise ukuchitheka. Lawa amaphutha okuzilungisa ayingozi .
Kuphela imoto iGolden Border Retriever yakho uma ikhahle kakhulu. Futhi uma impi yokulwa nezinwele zezinja eyehlulayo iba yisicefe kakhulu, yiya kumkhombisi esikhundleni sokufinyelela kuma-clippers.
Lokhu kuzokunika nesikhathi esengeziwe sokusebenza emazinyweni nasezindlebeni zakho zeGollie.
Ama-Coltrievers ayazuza ku- ukunakekelwa kwamazinyo nsuku zonke ukuvimbela isifo sezinsini nokunciphisa i-plaque buildup. Ungakwenza futhi zonke ezinye izinsuku ngenkathi ungeza nge Ukuhlafuna kwamazinyo !
Yenza isheke lamasonto onke lezindlebe zakho zeGolden Border Retriever. Uma ubona iphunga noma izimpawu zezinambuzane, thintana nodokotela wezilwane ukuthola inkambo engcono yokwenza.
Izipikili zezipikili kufanele futhi kube yingxenye yenqubo yokulungisa inja yakho. Kanye ngenyanga kuwumgomo omuhle , kepha ungakhuphula noma wehlise imvamisa ngokuya ngezidingo zomntwana wakho.
Ukuzivocavoca: Lungela amandla athile aphezulu!
Umsebenzi wengqondo nowomzimba kungumgogodla wobukhona beGolden Border Retriever yakho. Badinga kakhulu ukusebenza ubuchopho babo nokwelula imilenze yabo njalo.
Hlela ngezikhathi ezimbalwa zokudlala noma uhambe usuku lonke ngemidlwane, noma kunjalo. Lokhu kubasiza ukuthi bashise amandla ngaphandle kokufaka engozini yokulimala emajoyintini abo asathuthuka.
Njengoba bekhula futhi imisipha yabo iqina, ungakhuphula ukuzivocavoca umzimba. Kuzodingeka iGolden Border Collie yabantu abadala okungenani imizuzu engama-90 kuya ehoreni lomsebenzi womzimba wansuku zonke.
Ukwenza okuningi kulawa mahora angu-2 +, hlanganisa ukunyakaza nemidlalo yobuchopho, njengemidlalo ye-canine.
Okwe-Golden Border Collies, ukuzivocavoca umzimba kuyindlela yokubopha nokuxhuma nephakethe labo. Banokushayela okungokwemvelo ukuze babe wusizo. Sebenza ngokuzimisela, futhi ushintshe ukufisa kwabo ezintweni ezikusondeza ndawonye.
Hlangana neBuzz, ingxube edlalwayo yeGolden Border Retriever - Umthombo wesithombe
Uma ufuya imfuyo, lo mdlwane uzoya ekwaluseni njengenhlanzi esemanzini, futhi kuzobagcina bematasa usuku lonke.
IGolden Border Retrievers yizilwane uma kukhulunywa ngokugijima kanye ne-rally, zombili ezizogqoka le pup ngokushesha nje. Funa iqembu lokuqeqesha eliseduze nawe, futhi ulungiselele ukumangala!
Uma kungenzeka, thatha iGolden Border Collie yakho ngaphandle ukuze ushise amandla abo. Ukuzivumela zizulazule endaweni evikelekile, lapho zingakwazi ukuhogela futhi zigijime ngokulahla, kubalulekile.
Noma kunjalo, kuzoba nezikhathi lapho kufanele uzisebenzisele ngaphakathi endlini.
Yize lesi siphambano sinokubekezelelana okuphezulu ezindaweni ezinezimo ezishisayo nezibandayo, isimo sezulu esipholile silungile .
Ukudla: Nikeza amagama wamagama aphilile
Njengoba kunikezwe amandla emvelo e-hybrid, imvamisa ayayidinga 2.5 kuya 3 izinkomishi ngosuku ye ukudla okuomile okunamaprotheni ukuzigcina zikhuphuka.
Uma ukhetha ukondla iGollie yakho ngokususelwa kuye izidingo zekhalori zansuku zonke , kuzoba endaweni ethile ebangeni abazali okufanele balisebenzise.
Ama-Border Collies adinga ama-calories ayi-700 kuya ku-1 000, kanti i-Golden Retrievers icishe ibe ngama-calories angu-989 kuya ku-1,272 ngosuku.
AmaGold Border Collies amakhulu noma asebenzayo angadinga ukubhampa okuthe xaxa ukugcina okuqukethwe yizisu. Amashejuli wokondla nawo angasuselwa kubudala besilwane sakho, ubukhulu, kanye nempilo yakho.
Kuhlala isikhathi esingakanani amamiksi weGolden Retriever Border Collie?
Ngokujabulisayo, le fireball yenja iphila isikhathi eside-- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15 ngokwesilinganiso! Kepha noma ngabe kunempilo ebabazekayo, izimo ezithile zempilo zingakhulisa amakhanda abo amabi.
Okunye okuvame kakhulu kufaka phakathi ukungezwani komzimba nezinto ezithile, izinkinga ezihlangene (njenge i-hip dysplasia kanye ne-patellar luxation), futhi izingqinamba zamehlo (cabanga i-PRA kanye ne-cataract). Izimo zenhliziyo nesifo sokuwa ingakhula futhi.
I-Golden Retrievers, ikakhulukazi, ithambekele ekuthuthukiseni umdlavuza we-canine , futhi kungenzeka ukuthi le ndlela enqamulelayo nayo, nayo.
Ukubheja kwakho okuhle kakhulu ekunqandeni lezi zifo ukunamathela esimisweni sakho sokunakekelwa kokuzivikela se-pooch ngokwenkolo.
Lokhu kusho ukuthi ungalokothi uphuthelwe umthamo we-heartworm, ukukhukhumeza, kanye nokuvimbela imikhaza nokugcina isisindo esinempilo.
I-Golden Border Collie mix puppy
Siyawazi umbuzo osezingqondweni zawo wonke umuntu ukuthi, izobiza malini i-super-smart pup efana nale mali?
Ama-Coltrievers ayabiza kakhulu kunendlela ongacabanga ngayo. Izindleko ezijwayelekile ngu $ 300 kuya ku- $ 1,500 , yize iningi lizowela ndawana thile phakathi kwalezo zindawo zamanani amabili.
Izinsikazi namazinyane avela kudoti omncane bavame ukuba sohlangothini olubizayo. Uma ufuna ukonga imali embalwa, cabanga ukukhetha iSheldon esikhundleni sikaSheila. Ukuze uthole inkomba, i- Usayizi kadoti wale nhlanganisela uzungeze imidlwane engu-1 kuye ku-4 .
Abahlanganisi beGolden Retriever Border Collie
Ukulandela umkhondo womfuyi osezingeni eliphezulu wukuzivocavoca ngesineke, kepha kuyifanele inkathazo. Khipha amatheku ngomthunzi ngo ukucela iziqinisekiso zezempilo nokuhlela ukuvakashelwa mathupha .
Abafuyi kufanele babe nokuhlolwa kwezilwane okuqinisekisiwe kwezokwelapha kanye nokuhlolwa kofuzo okukhona, kokubili imidlwane nabazali. Kufanele futhi bakwemukele esikhungweni sabo ngezandla ezifudumele.
Sicela uqaphele ukuthi umfuyi uxhumana kanjani nezinja zakhe. Uzofuna ukunaka lapho kugcinwa khona izinja nokuthi kukuziphi izimo, futhi.
Uma uzizwa ngathi usukulungele, nazi ezinye izinhlobo zokufuya nezinja esingazithola ku-inthanethi:
Amapulazi Eqhude Asontekile (Snohomish, WA)
UMcGregor Goldens (Lacey, WA)
Ungahlola nezingane zaseGreenfield. Izici zaleli sayithi Imikhawulo ye-Border Collie , futhi Izingxube zeGolden Retriever ezindaweni eziningi ngaphesheya kwe-US.
Uma ufuna ukufinyelela kubalimi beGolden Retriever noma iBorder Collie abalimi, qhubeka. Bazise ukuthi ufunani. Bangase bakwazi ukukusiza ukuthi ukuthole.
Ukwamukela inhlanganisela yeGolden Retriever Border Collie
Uncamela ukwamukela? Unenhlanhla! Ukutakulwa kweGolden Retriever neBorder Collie kucishe kube kuningi njengekhebula elithile le-burger.
Abaningi babo bathatha izinhlobo ezihlanganisiwe, futhi, ngakho-ke kunethuba elihle lokuthi uzothola eyodwa neColtriever.
Futhi ungagcina amathebhu kuwebhusayithi yakho yangakini enobuntu ukuze ubone ukuthi bayayithatha yini i-Golden Border Collies. Okwamanje, nazi izinhlangano ezimbalwa zokutakula ukuqala usesho lwakho:
Ukutakulwa kweGulf Coast Golden Retriever (EMurdock, FL)
Cishe i-Heaven Golden Retriever Rescue and Sanctuary, Inc. (ICapon Bridge, WV)
IBorder Collie Save and Rescue, Inc. (Southlake, TX)
IBorder Collies Isidinga (ISan Pedro, CA)
Kungakuhle ukukuhlola Phakade Abangani Rescue Retriever . Le nhlangano ezinze eCalifornia ine-database ye-Golden Retriever esindiswa ngumbuso, engabonakala ilusizo impela.
Njengoba kungakholeki njengeColtrievers, ungahle ufune i-crossbreed enezici ezahlukahlukene.
Ezinye ziyizinja zokuqapha amandla amakhulu, kanti ezinye zinobuntu obukhuthele bokudlala kanzima. Ungathola futhi ukuhlanganiswa kweLab noma kweBorder kwiphakeji elincane noma okungama-low-shedders.
IBorder Collie German Shepherd hlanganisa (AKA Shollie)
Umxube weBorder Collie Labrador (AKA Borador)
Ukuhlanganiswa kweCorgi Golden Retriever (AKA Golden Corgi)
Ukuhlanganiswa kwePoodle Golden Retriever (AKA I-Goldendoodle )
Hlangana noSonny, umdlwane weGollie - Umthombo wesithombe
Kusukela ekuqaleni, umdlwane wakho we-Gollie uzoba namandla futhi ahlakaniphe. Bayokhula babe ngabantu abadala abanentshiseko nomoya wokuzimisela.
Inja enamandla kangaka izokwenza kahle kakhulu ezandleni zomnikazi osebenzayo. 'Ubuvila' abukho kulesi silulumagama sohlobo.
Yini oyithanda kakhulu ngeGolden Border Collie? Sitshele kumazwana abekiwe!
IGoldador: I-Amazing Retriever Combo
Umhlahlandlela we-Blue Merle Border Collie: Amaqiniso ama-5 Okufanele Afundwe
usayizi wokuxuba we-rottweiler german
i-lab emhlophe i-golden retriever mix
husky obomvu nomhlophe waseSiberia
Umngcele omncane we-collie wase-Australia ukuhlanganiswa komalusi